လွယ်ကူ မြန်ဆန် စားမြိန် ဟင်းချက်နည်းများ: ကြက်အသဲအမြစ်ဟင်း၊ ကန်ဇွန်းရွက် ကြက်အသဲအမြစ်ကြော်နှင့် ချဉ်ပေါင်ဟင်း
Posted by Snow at 11:54 AM
အိမ့်ချမ်းမြေ့ April 27, 2012 at 12:18 PM
ချဉ်ပေါင်ရွက်ချဉ်ဟင်း ပုံပေါ်အောင် မရိုက်နိုင်လို့ နောက်ဆုံး ငါးလေးကိုပဲ ခေါင်းထောင်ခိုင်းလိုက်ရတယ်.. ဆိုတာလေး သဘောကျတယ်း))
Snow April 27, 2012 at 2:08 PM
=D Thank you, Ma Lay!
စံပယ်ချို April 28, 2012 at 12:19 AM
Snow April 28, 2012 at 3:00 AM
Thanks, Ma Jasmine!! :)
ကြက်အသဲအမြစ်ဟင်း၊ ကန်ဇွန်းရွက် ကြက်အသဲအမြစ်ကြော်နှ...
ကြက်ကြော်၊ အာလူးဟင်း အစပ်ချက်နှင့် ပန်းဂေါ်ဖီ ဟင်းန...
ငါးသေတ္တာဟင်း၊ မြင်းခွာရွက်သုပ်၊ သခွားသီး ပဲကြာဇံဟင...
ကြက်ကင်သုပ်၊ ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော်နှင့် ဒန့်သလွန်ရွက...
ရေညှိထမင်းလိပ်၊ ဆယ်လ်မွန်သုပ်၊ ကင်မ်ချီနှင့် ကြက်သ...